နာမည် ဘယ်လို ခေါ်သလဲ ကွယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home & Garden » နာမည် ဘယ်လို ခေါ်သလဲ ကွယ်	32
နာမည် ဘယ်လို ခေါ်သလဲ ကွယ်
Posted by ဇီဇီ on Apr 15, 2015 in Home & Garden, My Dear Diary, Society & Lifestyle | 32 comments
ဘာပန်းမှန်း မသိရပဲ လှတဲ့ ပန်းလေးတွေကို ချစ်လို့ ဒီမှာ လာစုထားတာ။
ဖဘမှာ တင်ရင် တော့ အရောင်ပိုတင်ရတယ်။
သူက ပုံရဲ့ ကွာလတီကိုလျှော့ပစ်လို့။
တဂျီးဆီမှာတော့ တင်ရင် မူရင်းအတိုင်း တက်တာမို့ ပုံတင်လို့ ပိုကောင်းတယ်။
ပုံ တူတာလေးမို့ ကို ရွေးပေးလိုက်တာ။
စကာင်္ပူ မှာ ဆုံခွင့်မရခဲ့ဘူး။
သူတို့ သားအဖ ရိုက်လာတာတွေ ကြည့်ရတာ ပန်း တွေ က လှမှလှဘဲ။
ပုံ ၅ နဲ့ ၇ ကို အကြိုက်ဆုံးပါ။
ခင်ဇော် says: ဟယ်။။
အချိန်တိုရင်တော့ လည်ရတာနဲ့တင် အားမှာ မဟုတ်လို့ပါ။
ဦးဦးပါလေရာ says: .ပန်းဆိုတာ-
. လှ တဲ့ အချိန်ပေါ့…..။
.ပန်း လို လှ တဲ့ အချိန်ဆိုတာ
ခင်ဇော် says: အမည်မရှိလည်း
သူ့အလှကို အသိအမှတ်အပြုခံရတဲ့ ပန်းလေး ဆိုရင် ပြည့်စုံပါတယ်နော့.
Wow says: ခေါင်းလောင်းပန်းလေး အလယ်မာ ခရမ်းစက်လေးတွေကို ချစ်တယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: ဟုတ်တယ်နော်။
Wow says: ပန်းဒွေချဉ်း ဒါ့ပုံရိုက်တော့မှာလားလို့စ်.. အုယင်မူး ကိုကျတော့ မရိုက်ခဲ့ဝူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: အဲဒီ ဥယင်မူး ဂျီးက ဘယ်မှာမှန်းမှ မသိပဲကို။
သိရင် နာ့ လက်ချက်မိတာ ကြာပေါ့
kai says: Costco မှာအဲလိုပန်းတွေကို.. ပွင့်ပြီးအပင်အတိုင်းချွတ်ရောင်းတာလည်းရှိ..။ ပန်းပေါင်းစုံကို.. မျိုးစေ့တွေအထုတ်လိုက်ရောရောင်းတာလည်းရှိ…။
အမည်မသိ..။ ပန်းရောင်ပန်းများလို့.. ညှိ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: အနီးကပ် ရိုက်ထားလို့သာအကြီးကြီးထင်ရတာ။
အမှန်တော့ ပန်းလေးတွေက သေးသေးလေးတွေ။
naywoon ni says: နံပါတ်​ ၄ နဲ့ ၈ က လ၀န်းဂမုန်း အဖိုက ပွင့်​တဲ့ပန်းနဲ့ ​တော်​တော် ဆင်​တယ်​ ။ တစ်​ပင်​လုံးမြင်​ရမှ ​သေချာ​ပြောနိုင်​မယ်​ ။ :)​
ခင်ဇော် says: တစ်ပင်လုံးတော့ ရိုက်ခဲ့ဘူး။။။
ဦးကြောင်ကြီး says: ခွေးတေးပန်း
ခင်ဇော် says: ကြောင်းတေးပန်း မဟုတ် ပြီးဒါဘဲ
padonmar says: လှလိုက်တာ။ကြည့်သောသူမြင်၏ တဲ့။
ခင်ဇော် says: ဟုတ်တယ်။
ဒါတွေကို တန်ဖိုးမရှိတဲ့ပန်းလို့ ဘယ်သူပြောမလဲနော်
Mr. MarGa says: နာမည်​ ဘယ်​လိုပဲ​ခေါ်​ခေါ်
ခင်ဇော် says: ပညပ်တွေလို့ ပေါချင်ဒါယာ့
Mr. MarGa says: ပန်း ဆိုတာနဲ့တင် ပြည့်စုံနေပြီလေ
ဘာလို့ နာမည်​တပ် တံဆိပ်​ကပ်​ချင်​ရတာလဲ ဟင်
Ma Ma says: ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာလဲ အဲလိုဘာနာမည်မှန်းမသိတဲ့ ပန်းလှလှလေးတွေတွေ့တော့ ခိုင်ဇာကိုတောင် သတိရလိုက်မိသေးတယ်။
ခင်ဇော် says: အဲ၊
Ma Ma says: ရိပ်သာမှာ ယောဂီဝတ်ကြီးနဲ့ တရားစခန်းဝင်နေတုန်းမှာ မျက်စေ့ကလည်းမငြိမ်၊ ဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့မို့ မြင်လာတာ။
ကင်မရာကိုင်ပြီး ဓာတ်ပုံလိုက်ရိုက်နေရင် ဘုန်းကြီးရိုက်ထုတ်လိမ့်မယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12176
Alinn Z says: ပန်းဆိုရင် ဂေါ်ဖီပန်းတမျိုးကိုပဲ လျှာဂျီး တပြင်ပြင်နဲ့ကြည့်ချင်နေတယ်
ခင်ဇော် says: ဖွေးဖွေးမပါလို့ တော်သေး
Alinn Z says: .ဖွေးဖွေးသာ ဂေါ်ဖီပန်းကြီး ပန်ပြရင်တော့လား
စားပစ်မှာ ဖွေးဖွေးသော ဂေါ်ဖီပန်းသော ဘာသော ညာသော အကုန်
အောင် မိုးသူ says: နာမည်တွေတော့ သေချာမသိတာတော့အမှန်။ ဒီပန်းလေးတွေက ပြောရရင် အပင်ပေါ်မှာပဲ လှနေတဲ့ ပန်းလေးတွေပေါ့။ ခူးလိုက်တာနဲ့ ညိုးမှာအသေအချာပဲ။ သို့ပေမယ့် ပန်းတွေဆိုရင် အပင်ပေါ်မှာပဲ ထားတာကို ပိုသဘောကျတယ်။
ပိတောက်တို့ ဘာတို့ကျ ပန်ချင်တယ်ကော။
အောင် မိုးသူ says: ပန်းတွေထဲမှာ တွေ့တာနဲ့ပန်ချင်တဲ့ ပန်းဆိုတာများ သက်သက်ရှိသလားမသိ။ တော်တော်များများ နှင်းဆီတို့ ခရေတို့ စံပယ်တို့ ပိတောက်တို့ဆို ပန်ချင်သူများတယ်။
တောင်ပေါ်သား says: No ,4….. like it .
အောင် မိုးသူ says: သစ်ပင်၊ ပန်းပင်ဆို အကုန်ချစ်တယ်။
manawphyulay says: ဘာပန်းတွေလည်းဟင်… ပန်းနာမည်လေးတွေပါ တွဲရေးပေးရင် ပိုကောင်းမယ်။ အိမ်တွေမှာကော စိုက်လို့ရလား။ မျက်စိကို ကြည်သွားတာပဲ။
ခင်ဇော် says: ခေါင်းစဉ်ကြည့်လေ မနောလေးးး